Mieritrereta ao anaty boaty miaraka amin'ny Entrata Marketing Suite | Martech Zone
Mieritrereta ao anaty boaty miaraka amin'ny Entrata Marketing Suite
Alahady 7 Febroary 2016 Alakamisy Oktobra Oktobra 1, 2020 Douglas Karr
Ny amerikana dia mifidy bebe kokoa ny trano fanofana satria ny isan'ny mpivady manan-janaka dia mihena be ary ny Millenial dia misafidy ny ho mpanofa noho ny fivezivezena, ny fampiononana ary ny antony ara-bola.
Miaraka amin'ny fiakarana an-taonany maro ny tsenan'ny fanofana, tsy mahagaga raha nahita izany ny fandalinana vao haingana 74 isan-jaton'ny mpanofa trano ho avy dia mandeha amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny findain'izy ireo amin'ny fikarohana ao an-trano. Ny fandefasana amin'ny tranokala lisitry ny Internet, ny fanatsarana ny tranokala finday, ny media sosialy, ary ny fitantanana laza no loha laharana ho an'ireo mpitantana trano. Saingy, ny tontolon'ny vidin'ny trano tsy miovaova, ny firongatry ny lahatsoratra mipetraka amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny tranonkala famerenana ary ny habaka amin'ny lisitry ny lisitry ny Internet dia nahatonga azy io ho asa sahirana tsy takatry ny mpitantana.
Entrata's Marketing Suite dia vahaolana ara-barotra feno sy feno rahona manampy ny indostrian'ny trano hifehezana ny vidiny, ny lazany ary ny fandefasana azy rehetra rehefa mitondra fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranonkalany.
Mieritreritra ao anaty boaty
Ny mpitantana ny trano dia afaka mahita ny endrika sy serivisy rehetra ilain'izy ireo hivarotra ny fananany ao anatin'ny sehatra Entrata. Tsy mila mamorona intsony izy ireo na mieritreritra ivelan'ny boaty ho an'ny filan'izy ireo amin'ny marketing satria ny platforminay dia manao azy rehetra ho azy ireo. Ireto ny tolotra:
Portal Prospect ⓡ - Tranonkala manao ny Heavy Lifting
ProspectPortalⓡ dia vahaolana ao amin'ny tranokala mamaly tanteraka izay ahafahan'ny vondron'olona iray trano mampiseho ny lisitry ny fanofana misy azy ireo amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny tranonkalany. Ny CMS dia mamela ny fananana hifanakalo sary, hiditra ny teny lakile SEO, hanampy ny atiny vaovao ary hiova amin'ny famolavolana tranonkala vaovao amin'ny tsindry vitsivitsy fotsiny ao amin'ny dashboard Entrata. Ho fanampin'izany, ny tranokalanay dia mampiditra fitaovana fitarihana fitarihana (fampidirana karatra vahiny, naoty ary fanamarihana, safidy fampanofana an-tserasera, ary firesaka mivantana) hanampiana ny fifamoivoizana ao amin'ny tranokala ho tena fitarika.
Azontsika refesina ny fahombiazan'ny karazana fampielezan-kevitra ara-barotra izay tanterahinay, na ny fanatsarana ny motera fikarohana, ny fandoavam-bola isaky ny fanentanana na ny fanaovana paositra. Avy amin'ny fifamoivoizana an-tranonkala, isan'ny karatry ny vahiny sy ny tahan'ny fiovam-po, milaza amintsika izay rehetra tokony ho fantatra ny sehatra. Meghan Hill, Real Estate Guardian, fananana 150 mampiasa Prospect Portal
ILS Portal™ - Fotoana fitsitsiana, fampihenana ny fidirana data
Ny sombin-tsolika ILS Portal amin'ny dashboard Entrata dia mifehy ny varotra an-tserasera amin'ny fananana amin'ny feed automated ho an'ny serivisy lisitra internet lehibe rehetra. Izy io dia manala avy hatrany ireo singa nohofana ary manavao ireo tranokala rehetra miaraka amin'ny fanovana natao tamin'ny vidiny sy ny fepetra momba ny singa hafa.
Mahomby indrindra izahay amin'ny fahazoana ny lahatsoratray rehetra ao amin'ny Craigslist ary mijanona eo ambonin'ny valin'ny fikarohana. Ny fandefasana mivantana any amin'ny Craigslist tsy misy fitaovana dia manahirana sy mandany fotoana, noho izany dia sarotra ho an'ireo mpitantana ny fanananay ny nandefa matetika araka izay nangatahinay. Ankehitriny, mihamitombo ny fifamoivoizana manerana ny fananana rehetra avy amin'ny Craigslist noho izany. Amber Ammons, talen'ny varotra sy fanofanana, orinasan'ny fananana mandrakizay
Pricing Entrata™ - Vidiny mety, singa mety, fotoana mety
Ny sombin'ny Entrata Pricing ao amin'ny dashboard Entrata dia manara-maso ny lalan-dàlan'ny hofan-trano manontolo sy ny tontolon'ny fifaninanana haminavina ny fanombanana marina indrindra momba ny fandeferana amin'ny vidiny ho an'ny vondron'olona. Ny mpitantana ny trano dia afaka mijery ny angon-drakitra momba ny vidiny ao anaty interface intuitive miaraka amin'ny kisary sy tabilao mora vakiana mba hahalala vao haingana ny antony sy ny fihetsika.
ReputationScore™ - Famaritana izay tadiavin'ny mponina
ReputationScore dia manangona tsikera momba ny fananana manerana ny tranonkala ho lasa interface iray ao amin'ny dashboard Entrata izay misy koa ny rafitra fitantanana haino aman-jery sosialy sy famerenana votoaty. Ny rafitra fanaovana tatitra dia manampy ny fananana handrefesana ny fahombiazany arakaraka ny fandehan'ny fotoana, manasongadina ny tanjaka sy ny fahalemen'ny fananana.
Vao tsy ela akory izay i Entrata dia nanangona angon-drakitra momba ny fomba fijery sy ny fanombanana ny hevitra sy ny haino aman-jery sosialy ho an'ny mponina maherin'ny 2,000.
Tsindrio eto raha hamaky ny fandalinana feno
SEO Services - Mampitombo ny fahitana, mampitombo ny fifamoivoizana
Manolotra ny mpanjifanay roa izahay onpage sy paikady SEO ivelan'ny pejy hampitomboana ny fahitana sy ny fivezivezena mankany amin'ny tranonkalany. Ho fanampin'izany, ny ekipanay dia manome paikady fitantanana laza marobe an-tserasera izay misy ny zava-drehetra manomboka amin'ny famoronana atiny am-boalohany ka hatramin'ny fampifandraisana ny pejy fananana amin'ireo tranokala media malaza.
LeadManager - Tsy misy firaka havia aoriany
LeadManager dia manamafy ny fifamoivoizan'ny karatry ny vahinian'ny olona ao anaty dashboard Entrata. Izy io dia manangona sy mandamina ny loharanom-pahalalana mitarika fananana rehetra, na fitsidihana an-telefaona, na fangatahana an-tserasera izany mba hanomezana fanarahana sy fanarahan-dia mora ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fitarihana. Miaraka amin'ny fivezivezena rehetra mitarika sy ny tatitra hita amin'ny toerana iray, ny fananana dia afaka mifandray amina fitarihana bebe kokoa, mampitaha ny valiny ary mandray fanapahan-kevitra tsara momba izay handaniany ny dolara marketing.
Tags: mpanofa tranoentrataentrata marketing suiteilsportalmpitarika mpitantanafitantanana fanananamarketing amin'ny fitantanana fanananavavahadin-tseraseraprospectportalvarotra sy hofa fananana mifakamarketing amin'ny mpanofapaikady seo mpanofarentersreputadvisor
Dingana 3 hanombohana fanentanana amin'ny marketing amin'ny horonan-tsary
Fomba 5 mampientanentana ny fahombiazan'ny varotra miditra